अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलभित्र दुव्र्यबहार गरेको भिडियो भाइरल भएपछि छानबीन समिति गठन - Arthatantra.com
संविधान कार्यान्वयन गर्दै देशको आर्थिक समृद्धि पक्षमा अर्थमन्त्री कार्की
भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सानिमाको एक्सटेन्सन काउन्टर
थानकोटदेखि कलंकी सडक विस्तार कार्य चाँडो गरी आर्थिक क्रान्तिमा लाग्नुछ : कृष्णगोपाल
नयाँ कक्षाकोठामा पढ्न पाउँदा उत्साहित छन् थाक्रेका चेपाङ बालबालिका
अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलभित्र दुव्र्यबहार गरेको भिडियो भाइरल भएपछि छानबीन समिति गठन
नयाँ दिल्ली । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित एक अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा एक एयरलाइन्सका कर्मचारीले यात्रुलाई दुव्र्यबहार गरेको भिडियो भाइरल भएपछि (सो भिडियो धेरैले हेरेपछि) त्यसको छानबिनका लागि सरकारले छानबीन समिति गठन गरेको छ ।
करिब महिना दिन अघि भारतको चेन्नइबाट नयाँ दिल्लीस्थित इन्दिरागान्धी अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेका एकजना यात्रुलाई विमानस्थल मै भारतको इन्डिगो एयरलाइन्सका कर्मचारीले दुव्र्यबहार गरेका थिए । मङ्गलबार सार्वजनिक भएको सो भिडियोमा एकजना यात्रुलाई विमान अवतरण गरेपछि बाहिर निस्किने क्रममा घाँटीमा समातेर लछार्दै बाहिर निकालेका छन् ।
उक्त दुव्र्यबहारसम्बन्धी भिडियो मङ्गलबार मात्र सार्वजनिक भएको थियो । उक्त भिडियो मङ्गलबार नै भारतका करोडौँ नागरिकले हेरिसकेका छन् । उक्त भिडियो भाइरल भएपछि उक्त एयरलाइन्सले भने सार्वजनिकरुपमा नै माफी मागेको छ । तर सर्वसाधारण यात्रुमाथि गरिएको सो दुव्र्यबहारप्रति देशव्यापीरुपमा बढेको आक्रोस अझै मत्थर भने भएको छैन ।
उक्त घटनाको छानबीन गर्न बुधबार बिहानै एक छानबीन समिति गठन गरिएको जानकारी भारतीय नागरिक उड्डयन मन्त्री अशोक गजापतिले दिएका छन् । भारतीय नागरिक उड्डयन निकायका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा सो समिति गठन गरिएको छ । उनलाई उक्त घटनाको सत्यतथ्य छानबीन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन दिन भनिएको छ ।
मन्त्री गजापतिले भनेका छन्– एयरलाइन्सजस्तो सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायबाट यात्रुमा गरिएको यो व्यबहार निन्दनीय छ, दोषीमाथि कारबाही हुन्छ हामीले यस घटनाको छानबीन सुरु गरिसकेका छौँ । भारतीय नागरिक उड्डयन मन्त्री अशोक गजापतिले मङ्गलबार साँझ नै सो सम्बन्धी छानबीनका लागि समिति गठन गर्ने जानकारी दिएका थिए ।
उनलाई भौतिकरुपमा लछारपखार पार्नुको साथै गाली गलौज पनि गरिएको सार्वजनिक भएको सो भिडियाको फुटेजहरुमा देखिन्छ । (रासस÷सिन्ह्वा)
प्रकाशित मितिः २०७४ कार्तिक २२
अन्तर्राष्ट्रिय सेयर बजारमा प्रवेश गरेको सगुनले खुलाउँदैछ २ अर्बको मिनी आइपिओ ! काठमाण्डौं । सामाजिक सञ्जाल सगुनले २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मिनि आइपिओ खोल्ने भएको छ । […]
‘रेमिट्यान्स’को सामाजिक मूल्य : ताेडियाे परिवार, माेडियाे जिन्दगी ! काठमाडौं : संकटमा पनि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको भनिएको ‘रेमिट्यान्स’को सामाजिक मूल्य […]
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको टोली नेपालमा, बैंकका अधिकारीहरुसँग भेटघाट तिब्र काठमाण्डौं । नेपालको अर्थतन्त्र तथा वित्तीय क्षेत्रको अध्ययन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा […]
डेनमार्क र नर्वेद्वारा आफ्ना नागरिकलाई नेपालमा भ्रमण गर्न सिफारिस काठमाण्डौं । स्केन्डीनेभियन देशहरू डेनमार्क र नर्वेमा लोकप्रिय पर्यटक म्यागजिनहरुले […]